अन्धविश्वास र भ्रमको खेती गर्दै सशस्त्र प्रहरी नै ख्रिष्टियन धर्म प्रचारमा ! (भिडियो) - Purbeli News
अन्धविश्वास र भ्रमको खेती गर्दै सशस्त्र प्रहरी नै ख्रिष्टियन धर्म प्रचारमा ! (भिडियो)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आश्विन १८, २०७५ समय: ७:५२:१६
दिलिपकुमार गुरुङ सशस्त्र प्रहरीका बहालवाला हवल्दार हुन् । उनी खुलेयाम ख्ष्टिियन धर्म प्रचारमा सक्रिय भएको खुलासा भएको छ । उनले धर्म प्रचार मात्रै गरेका छैनन्, समाजमा अन्धविश्वास र भ्रम फैलाइरहेका छन् । भन्छन्, ‘परमेश्वकै कृपाले जागिर खाएँ, प्रभुकै आशीर्वादमा काम गरिरहेको छु ।’
मंगलबार धर्म प्रचारका लागि गुल्मीमा आयोजित एक कार्यक्रममा हवल्दार दिलिपकुमारले ख्रिष्टियन धर्ममा लागेपछि फलिफाप भएको बताए । गत चैतमा ख्रिष्टियन प्रवेश गरेका गुरुङ अहिले यशुख्रिष्टको प्रदेश दूतका रुपमा सक्रिय छन् । उनले एक कार्यक्रममै भने कि, ‘पहिला खुब विरामी हुन्थेँ, जिऊ दुब्लाउँदै गएको थियो, घरमा झगडा भइरहन्थ्यो, प्रभुको बिश्वास गर्न थालेपछि सबै ठीक भएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा करिब १६ वर्ष विताइसकेका गुरुङको पोस्टिङ तनुहूँमा भएको छ । उनको जन्मघर स्याङ्जा हो । तर उनी पोखरा, बुटवल, अर्घाखाँचीसम्म ख्रिष्टियन धर्म प्रचारमा हिँड्छन् । परिचय लुकाउँदै, नाम ढाँट्दै प्रभुका नाममा अन्धविश्वासयुक्त भ्रम फैलाउँछन् । अनि, मानिसहरु त्यसैलाई पत्याउँछन् । मंगलबार करिब ३ सय जना सहभागी कार्यक्रममा उनले प्रभु यशुको गुणगान गाउँदा भक्तहरु मन्त्रमुग्ध थिए ।